पूर्वलडाकु बोल्न थाले, शिविर घोटालाको हिसाब कसले दिन्छ ? – Nepal Press
पूर्वलडाकु बोल्न थाले, शिविर घोटालाको हिसाब कसले दिन्छ ?
२०७७ फागुन २ गते ९:४४
विगत वर्षहरुमा झैं यस वर्षको फागुन १ गते पनि नेकपाको नामबाट माओवादी समूहले ‘जनयुद्ध’को सम्झना गरेको छ । बाबुराम भट्टराईले पनि ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाएका छन् । तर उनी सम्बद्ध दलले ‘जनयुद्ध’को ‘ज’ पनि उच्चारण गर्दैन ।
तिनीहरुको ‘जनयुद्ध’ सुरु हुँदा म स्कूलमा पढ्थें । तिनीहरुका कार्यकर्ता हामीलाई आतंकित पार्न जान्थे । हामीले तिनीहरुलाई कडा प्रतिकार गरेर फिर्ता पठाइदिन्थ्यौं ।
देशका कैयौं जिल्ला माओवादी आतंकले पीडित भइरहँदा प्यूठान कम क्षति हुने जिल्ला थियो । नेकपा (मसाल)को प्रभाव भएको ठाउँ भएकाले तिनीहरुको आतंकलाई हामीले कडा विरोध गर्दथ्यौं । पार्टीको नीति पनि माओवादी आतंकको विरोध गर्ने भन्ने थियो । विद्यार्थी समयदेखि माओवादीको फाल्तु आतंकको विरोध गरेका हामीले काठमाडौं आएपछि त्यो आतंकको विरुद्धमा लेख्न पनि थाल्यौं ।
मारिएका सबै माओवादीले मात्रै मारेका हुन् भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो पनि बेठीक छ । माओवादी दबाउने नाममा राज्यले श्वेत आतंक मच्याएको कारण हजारौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् । ‘जनयुद्ध’को नाममा निर्दाेषहरु मारिनुमा राज्य र माओवादी पक्ष उत्तिकै दोषी थिए ।
देशको राजनीतिमा संघीयता नामको यस्तो फाल्तु जिनिस भित्रियो कि संघीयता लागू भएको तीन वर्षमै त्यसले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेको छ ।
‘जनयुद्ध’को आवरणमा माओवादी समूहले भित्र्याएका संघीयता, जातीयता, क्षेत्रीयता कुख्यात र देशको लागि घातक एजेण्डाहरु हुन् । ती एजेण्डाहरुले धेरै भ्रम दिएर देशलाई विखण्डन, जनतालाई विभाजन, जातीय सद्भाव खलबल्याउने बाटोमा लगे ।
देशको राजनीतिमा संघीयता नामको यस्तो फाल्तु जिनिस भित्रियो कि संघीयता लागू भएको तीन वर्षमै त्यसले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाइसकेको छ । सरकारको सामान्य खर्चमा भयंकर बढोत्तरी, विकास बजेटको कटौती, भ्रष्टाचार, मध्यमखालका नेताहरुको विगविगीले जनता आजित भएका छन् । प्रदेशको वर्तमान संरचनाहरु आवश्यक थिएनन् भन्ने कुराको सबैभन्दा बोध तिनीहरुलाई नै भएको होला ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयताप्रति प्रष्ट विमति राख्छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ र त्यसको असर राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि देखिंदै गएको छ । संघीयता कहिले खारेज हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिए पनि ढिलोचाँडो खारेज हुने बाटोमा देश गइरहेको छ ।
माओवादीले जुन ‘जनयुद्ध’ गरेको थियो, त्यो सत्ता प्राप्तिको लागि थियो भन्ने कुरा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको स्वार्थ र सत्तायात्राले प्रष्ट हुन्छ । माओवादी समूहले हरेक सरकारमा जानैपर्ने नीति अंगीकार गरेको थियो ।
माओवादीले बारम्बार अवसरवादको चरम नमूना प्रस्तुत गरेको छ । अब उसलाई अवसरवाद सामान्य लाग्न थालेको छ । अब अवसरवाद, पदलोलुपता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा माओवादी समूहका नेताहरुको आम नीति बनिसकेको छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरुलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ।
माओवादी समूहका नेताहरुले आफ्ना व्यक्तिगत, अवसरवादी र संकीर्ण महत्वाकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि ‘जनयुद्ध’को नाममा ‘शहीदहरुको खेती’ गरेका थिए भन्ने कुरा व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ । यहाँनिर प्रष्ट हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने माओवादी ‘जनयुद्ध’मा मारिएकाहरु वास्तविक रुपमा शहीदहरु थिए । त्याग, समर्पण र बलिदानले ओतप्रोत भएका लडाकू र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो जीवनको बलिदानी दिएका थिए ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’मा जसले बलिदानी दिएका थिए, उनीहरुले क्रान्तिको लागि भनेर दिएका थिए । वास्तविकता यो थियो कि माओवादी ‘जनयुद्ध’ कुनै क्रान्ति थिएन । माओवादी लडाकु र कार्यकर्ताहरुको बलिदानीको माओवादी नेतृत्वले चरम दुरुपयोग गरेर सत्ता प्राप्ति गर्नु नै मुख्य उद्देश्य थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
गैरक्रान्तिकारी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि माओवादी समूहले जुन ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेको थियो, अब माओवादीको नेतृत्वले आफ्नो सरकार प्राप्तिको उद्देश्य पूरा गरेको छ । तर ‘जनयुद्ध’मा सामेल भएका वा समर्थन गरेका दशौं हजारको विचल्ली भएको छ । माओवादी र राज्यबाट पीडित जनताका ६४ हजार हिंसाका घटनामा छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाइएको छैन । ‘जनयुद्ध’का घाइतेहरुलाई बेवारिसे बनाइएको छ । हजारौं लडाकूहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । यी केही तथ्यहरुबाट माओवादी ‘जनयुद्ध’ क्रान्तिको नाममा भ्रान्ति थियो भन्ने वास्तविकता हाम्रा अगाडि छ ।
‘प्रचण्डपथ’को त्यो रुप शान्ति प्रक्रियामा आउँदा भित्ते राष्ट्रपतिको रुपमा, त्यो सम्भावना नभएपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा र २०७७ सम्म आउँदा प्रधानमन्त्री नपाएको झोंकमा पार्टी फुटाउने तहसम्म स्खलित भइसकेको छ ।
यदि २०६३ सालको जनआन्दोलनलाई क्रान्ति पूरा भएको मान्ने हो भने जनआन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादीहरुका बन्दूकका विरुद्ध लडिएको आन्दोलन थियो । जनआन्दोलनले राजाको निरंकुश एवं प्रतिगमनको समाप्ति र माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने मुख्य उद्देश्य राखेको थियो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो । माओवादीले त्यसलाई नैतिक समर्थन गरेको थियो भने केही हदसम्म भौतिक सहभागिता जनाएको थियो ।
पुष्पकमल दाहालले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अझै पनि जनयुद्धको धङधङी देखाउने गर्दछन् । जुन ‘जनयुद्ध’लाई अगाडि बढाउनको लागि भारतीय स्वार्थमा धक्का लाग्ने कुनै काम नगर्ने चिठी लेखेर दिल्ली पठाउनुपरेको थियो । जुन ‘जनयुद्ध’लाई अवतरण गराउनको लागि दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्नु परेको थियो, त्यही ‘जनयुद्ध’को धम्की बारम्बार दिइरहनु प्रचण्डको पतन हुँदाको बाध्यता हो भन्ने कुरा सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ ।
‘जनयुद्ध’को वास्तविक रुप जनताको सपनाको हत्या र नेताहरुको विलासी जीवन हो । सुरुमै प्रचण्डको डेढ लाखको खाट, एक लाखको घडी, महँगो फ्ल्याट, माओवादीका सबैजसो नेताको विलासी जीवनबाट देखिंदै आएको थियो । माओवादी नेताहरुको जीवनशैलीले भद्दा पूँजीवादको विकृत रुप लिइसकेको छ ।
नेताहरुका करोडौंका महल, महङ्गा गाडी, विलासी जीवन, विदेशमा निर्मित पहिरन, घडी, झोला, पर्फ्युम सामान्य भइसकेका छन् । आफ्नो जीवनशैलीलाई विकृत पूँजीवादी शैलीमा लैजानको लागि ठेकेदार र व्यापारीहरुसँग सङ्गत, उठबस र कमिसनका चक्कर ‘जनयुद्ध’का वास्तविकता हुन् ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ विगत भइसकेको छ, माओवादीहरुले जति हल्ला गरे पनि त्यसको पुष्टि हुन सक्दैन । ‘जनयुद्ध’को बयान गरेर नेपाली समाजलाई भ्रम पार्नु भनेको फेरि पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने प्रयत्न मात्रै हो
माओवादी नेतृत्वको जसरी वर्गउत्थान भयो, त्यो निकै आपत्तिको विषय हो । तिनीहरुको वर्गउत्थान कुनै प्राकृतिक तरिकाले भएको होइन, बरु लडाकूकाे बलिदानबाट प्राप्त भएको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर भएको हो ।
प्रचण्ड समूहलाई परित्याग गरेका पूर्वलडाकूहरुले शिविर घोटालाको छानबिन हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । झण्डै १० वर्षपछि शिविर घोटालाको हिसाब माग अगाडि सार्नु निकै गम्भीर विषय हो ।
जतिबेला माओवादी लडाकू शिविरभित्र कैद थिए, तिनीहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अब लडाकूहरु बोल्न सक्ने अवस्थामा आएका छन् । माओवादी समूहले लडाकूको दिमागलाई कसरी बन्धक बनाएर राखेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो याे।
माओवादी समूहले विगतका राजनीतिक गल्तीहरुप्रति पश्चाताप गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीको छानबिन गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएर अगाडि बढ्नु नै तिनीहरुको लागि हितकर हुनेछ । माओवादी नेतृत्वको जुन ढंगले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक ढंगले भ्रष्टीकरण भएको छ, अब त्यसका विरुद्धमा संघर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन २ गते ९:४४